धेरै मानिसहरू सांगीतिक कला आशक्त छन्। संगीत - मानव आत्माको शक्ति वृद्धि गर्न, वा दुःख उहाँलाई सान्त्वना ठूलो तरिका हो। संगीत विद्यालय - ठूलो संस्था, जो तपाईं मूल कुराहरू सिक्न गर्न अनुमति दिन्छ, साथै साधन मास्टर कसरी को nuances धेरै। संगीत को शिल्प धेरै newcomers आफ्नो क्यारियर को शुरुवात त्यहाँ पठाइएको छ। गितार प्ले को तरिका अन्वेषण गर्न थालेका छन् गर्नेहरूलाई मान्छे, अक्सर के pentatonic गिटार बारेमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। यस लेखमा हामी यो प्रश्नको जवाफ थाहा हुनेछ। साथै, हामी यस्तो कदम pentatonic कि सजग हुन्छन्।
त्यस अवस्थामा, pentatonic मात्रा विकास गर्न तपाईं कुनै पनि तरिका छैनन् भने इच्छा, तर तैपनि एकै समयमा तपाईं सक्षम अप ध्वनिक वा बिजुली गिटार मा एक आश्चर्यजनक एकल संग, त्यसपछि ढिलो आउन वा पछि तपाईं अझै पनि यो अवधि सामना गर्न हुनेथियो हुन चाहन्छ। यो किन छ?
एक मात्रा, जहाँ5वर्तमान ध्वनि छ - अपरिहार्य भएको pentatonic मात्रा किनभने - सिक्ने के pentatonic गिटार। यो मात्रा एक सुविधा यो अनिवार्य जो Tritons फारम गर्न सक्छन् कुनै semitones, साथै ध्वनि, छ भन्ने छ।
जो (साथै र bassists र यसबाहेक, कीबोर्ड, को सांगीतिक fraternity अन्य थुप्रै सदस्यहरू) सबै भन्दा प्रसिद्ध guitarists को भन्न गर्न pentatonic मात्रा प्रयोग गर्न सकेन गाह्रो हुनेछ। उदाहरणका लागि, उदास pentatonic मात्रा - यो पक्ष, जो बिना यो improvised गर्न सकिन्छ। improvisation बिना खेल - र, मूलतः, यो हो राम्रो गाह्रो भएको कुरा हो।
को pentatonic मात्रा देखि - यो pyatistupenny बाटो, diatonic मात्रा को कुनै पनि गर्न यसको विपरीत, यो7को बाहिर छ, तर ध्वनि मात्र 5। यो गितार प्ले यो प्रविधी को शक्ति छ। सातौं शताब्दीमा प्राचीन चीन को संगीत स्कूल दार्शनिक अभिधारणा स्थिति यो प्रविधी erected। यो मात्रा प्रत्येक टिप्पणी एक प्रकारको, एक पुरा को रूप व्यक्तिविशेष र समाज मा एक निश्चित रहस्यमय प्रभाव चाहनुभएको कि विश्वास थियो।
त्यहाँ pentatonic दुई प्रकारका छन्। यस मामला मा, सानातिना pentatonic मात्रा बस रूपमा majeure रूपमा लोकप्रिय छ।
सानातिना pentatonic सिद्धान्तहरू लगभग ठीक majeure मनपर्छ। मात्र फरक अलि फरक टोन छ। यो पिच को Parallelism कारण हो। तसर्थ, हामी चौथो र प्रमुख मात्रा को सातौं चरणको हटाउने द्वारा pentatonic मात्रा प्राप्त गर्नुहोस्। यस मामला मा, हामी दोस्रो र छैटौं ग्रेड देखि सानातिना हटाउन। Parallelism को नियम किन pentatonic मात्रा लागि पूर्ण छ भन्ने छ।
त्यसैले, धेरै महत्वपूर्ण नियम छ: समानान्तर माइनर यो अवस्थित छ भने, प्रमुख सबै वर्णहरू retaining गर्दा, मामूली को छैटौं बजाइएको मा निर्मित गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, प्रमुख र tonics देखि, यस्तो मामला मा हुनेछ सानातिना टनिक एक सानो तेस्रो तल लागि फिर्ता गर्न एक विकल्प छ। बस राख्नु, यो स्ट्रिङ तल दुई frets मा हुनेछ।
गरेको हामी एक सानो प्रमुख कुनै पनि धुन सुधार गर्न चाहनुहुन्छ कि कल्पना गरौं। तिमी, तार को कुनै पनि बीचमा एउटा टिप्पणी फेला पार्न गौण pentatonic मात्रा को सिद्धान्त उल्लेख र टिप्पणीहरू बाँकी तुरुन्तै आधारभूत टनिक दिइएको स्थिति आवश्यक छ। चार frets को pentatonic मात्रा को चौडाई अनुसार हुन्छन्। चार औंलाहरु चार frets लागि सीधा जिम्मेवार छन्, आफ्नो औंलाहरु प्रत्येक आफ्नो fret मा टिप्पणी यसको लागि जिम्मेवार छ। शब्द, द्वारा denoted छ जो - अवस्था खेल।
साईट संगीतकार दिइएको छ कि मुख्य सल्लाह, तिनीहरूले विपरित कम देखि र माथि उच्चतम टिप्पणीहरू गर्न लिएर, सबै pentatonic मात्रा गुमाउन आवश्यकता हो, र त्यसपछि छ। तपाईं सबै डाटा खेल्न सिक्न गर्दा सिधै प्रारम्भिक संस्करणमा आंकडा, तपाईं त सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र वैविध्यपूर्ण खेल। हामी प्ले तराजू को सजिलो तरिका यी तत्व आठौं टिप्पणीहरू प्ले छ सम्झना गर्नुपर्छ। यस मामला मा, यो अवधि बुझाउँछ। प्रत्येक शेयर दुई नोटहरू द्वारा प्ले छ नबिर्सिनुहोला। उदाहरणका लागि, एक सानो मा pentatonic विचार गर्नुहोस्।
बन्धन प्रविधि व्यायाम
गरेको तेस्रो स्ट्रिङ मा मध्य गरौं। यो बिन्दु को टनिक, दोस्रो fret हुनेछ। अब, तपाईंको forefinger तेस्रो स्ट्रिङ लिन र प्रत्यक्ष दोस्रो स्थिति प्राप्त गर्नुहोस्। अब तेस्रो fret छैटौं स्ट्रिङ नै प्ले गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो बिन्दु, सबै भन्दा कम ध्वनि मा। त्यसपछि तालिका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
यो उदाहरण मा, तल लाइन, tablature, र त्यहाँ बस गितार को घाँटी। तथापि, माथि आफ्नो पहिलो स्ट्रिङ, छैटौं को बेला तल। विभाजन - दाँया मा एक उपकरण शरीर राम्रो र बायाँ छ। fret नम्बर तार मा प्रदर्शित छ। एकै समयमा उहाँले खातामा लिएर माथि स्थित सबै टिप्पणीहरू, चित्रण गरिएको छ।
त्यहाँ अर्को रोचक तरिका हो। यो विधि भनिन्छ - एक triplet। यो प्रत्येक चौथो अंश तीन बराबर भागमा सीधा विभाजित छ। हरेक तीन नोटहरू यसलाई समान एक हडताल भित्र महत्त्वपूर्ण छ, प्ले गर्नुपर्छ। एक क्लासिक उदाहरण यो मामला मा - एक Waltz। "एक-दुई-तीन, एक-दुई-तीन।" - हामीलाई मानक Waltz, हामीले देख्यौं, उदाहरणका लागि, चलचित्रमा सम्झन गरौं
ग प्रमुख pentatonic मात्रा विचार
के एक pentatonic majeure बारेमा थप विवरण मा कुरा गरौं। यो प्रविधी प्रमुख मात्रा-चौथो र सातौं चरणमा गर्न हटाउने द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दा प्राकृतिक बाट। तदनुसार, यो प्रविधी सूत्र:3(W) -2(डी) -3(ई) -5(जी) -6(एक)।
यसलाई निम्न ध्यान लायक छ। ग प्रमुख र एक-सानो pentatonic मात्रा वास्तवमा नै ध्वनि बनेको छ भन्ने तथ्यलाई। तैपनि, तिनीहरू सबै धेरै फरक अन्तराल संरचना छ भन्ने तथ्यलाई कारण, तिनीहरूले बेग्लाबेग्लै छ। यस मामला मा, तिनीहरूले नियम नै जोडी टन अधीनमा छन्। यो आफ्नो बाटो मा हेरफेर को संकेत को नै नम्बर जो सी मेजर, माइनर, प्रमुख छ। उदाहरणका लागि, - सी मेजर - एक सानो, जी प्रमुख - सानातिना ई (वा फा तेज)। यसरी, यो बाहिर जान्छ र जब यो सम्पत्ति को सम्बन्ध मा छलफल बक्से pentatonic गिटार, कि, सार्वभौमिक छन्। अर्को शब्दमा, ग आफ्नो संरचना मा प्रमुख र एक-सानो pentatonic मात्रा नै fingering छ। अझै प्रत्येक अन्य फरक नै स्थान सीधा tonal केन्द्र, साथै तिनीहरूलाई अन्य कदम मा।
जापानी लोक संगीत, साथै, सिद्धान्त, एसियाली, आधा-टोन pentatonic लोकप्रिय स्वागत मा मा। त्यहाँ एकदम चिरपरिचित pyatistupennye बाँध्न, आधारभूत सात-चरण अडियो श्रृंखला बाहेक छ।
आधा-टोन pentatonic मात्रा - पूर्वी pentatonic दृश्य को देशहरूमा बीचमा व्यापक छ। efgg # -A #: यो pentatonic निम्न एउटा उदाहरण। यस मामला मा अन्तराल एक semitones (अर्थात् सानो सेकेन्ड) प्रतिनिधित्व गर्छ। यस मामला मा, intervaly- छ EF र GG #।
को pentatonic मात्रा अन्य उदाहरणहरू
खैर, यो मिश्रित र pentatonic मात्रा स्वभावका छ। मिश्रित हाफटोन र स्वभावका जबकि शास्त्रीय bespolutonovoy pentatonics को संयुक्त गुण इन्डोनेसियाली slendro मात्रा को एक प्रकार छ। त्यहाँ एक टोन वा टन छैन।
pentatonic प्रयोग Guitarists
आधुनिक समयमा आर Fripp सबैभन्दा प्रमुख guitarists को एक साधारण तराजू को एक विकास लागि रोजगारीको पाँच छ वर्ष लाग्छ कि तर्क। तर, धेरै मान्छे तराजू को ठूलो संख्या तिनीहरूले तिनीहरूलाई लागि राम्रो थाहा लाग्छ। यो घटना वर्णन गर्न, यो चिरपरिचित र अति राम्रो लोक अभिव्यक्ति प्रयोग गर्न सम्भव छ "टिप्न इन्च।" विस्तार सट्टा यी मान्छे, गर्न र पहिले नै ज्ञात को आफ्नो ज्ञान र समझ बढाउन, केहि mastering बिना अर्को एक देखि सीधा हाम फाल्न।
पछि देखि pentatonic मात्रा सबैभन्दा सजिलो, र साथै, र frets को विकास को लागि एक लोकप्रिय तरिका, र त्यसपछि छ त्यो संगीत सबै शैलीहरू भेटिए। यस कारण एक विशाल संख्या छन्। घर, सबै भन्दा, संभावना तटस्थ ध्वनि यो प्रविधी। Maylz Devis को pentatonic मात्रा आफ्नो improvisations विशेष तीव्र छ प्रयोग। विशेष मा, पनि जहाँ यो अस्वीकार्य जस्तो हुन सक्छ।
प्राकृतिक मोड को अलग
तथापि, pentatonic को विशाल लाभ बाहेक, यो पनि एक ठूलो बेफाइदा छ। यसलाई बरु चाँडै नरमाइलो लाग्यो सुनिन्छ र एक fret मा असामान्य कुरा संग आएको भन्ने तथ्यलाई एकदम गाह्रो हुन्छ। को pentatonic ध्वनि विविधता गर्न मुख्य मानक तरिका चरण 5b र उदास को वाहेक हुन सक्छ। साथै, धेरै आफ्नो नयाँ कर्ड प्रत्येक लागि pentatonic मात्रा tonikalnye प्रयोग। उदास को परम्परा मा यो सबै को बारे मा एक pentatonic प्रयोग गर्न निर्णय कर्डहरु क्रमलाई।
तैपनि, त्यहाँ अन्य कुराहरु छ, र अभिव्यक्ति र pentatonic को संभावनाहरु विस्तार गर्न मद्दत गर्छ अर्को ठूलो तरिका हो। केवल5टिप्पणीहरू प्रयोग गर्दा यो विधि संग, तपाईं धेरै असामान्य ध्वनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। यो विधि "प्राकृतिक pentatonic harmonies देखि अलग" भनिएको छ।
डोराएन, लिडियन, Mixolydian: सुरु गर्न, हामीलाई तीन भन्दा साधारण frets गरौं। अब संवाददाता कर्ड fret संग जडान सम्झना। यो निम्न, तपाईं frets प्रत्येक मा pentatonic मात्रा फेला पर्छ। त्यहाँ धेरै pentatonic मा ध्वनि स्थान पाँच मात्र सम्भव प्रकार हो भन्ने तथ्यलाई कारण, हाम्रो लक्ष्य हाम्रो चुनिएको fret यी विकल्पहरू अपील फेला पार्न छ।
सबैभन्दा सरल सिद्धान्त प्रयोग गरेर हामी प्रत्येक टिप्पणी सबै सम्भव विकल्पहरू प्रयास सुरु अब छन्। (- मामूली तेस्रो सुरु गर्न अर्थात्) यसबाहेक, यदि संगीत को सबै भन्दा एकदम ठूलो दोस्रो निर्माण गर्न असम्भव छ, त्यसपछि विकल्प हामी मात्र एक बायाँ छन्। हामी परिणाम generalize भने, हामी जो प्रत्येक विशेष चरण pentatonic र यसको pentatonic यकिन हुन सक्छ अनुसार निष्कर्षमा प्राप्त। तपाईं कर्डहरु तराजू तालमेल एक analogy आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। फलस्वरूप, हामी एक कर्ड पिटे गर्न, सात pentatonic मात्रा प्राप्त गर्नुहोस्। हामी कर्डहरु harping नयाँ अवसर को एक किसिम खोल्न तिनीहरूलाई कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सिद्धान्त improvisation लागि अत्यन्तै राम्रो छ। तपाईं बिना कुनै हिचकिचाहट, एक सर्वसाधारण pentatonic ध्वनि नै सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं हरेक समय NCCA को पिच तल semitone छ जो pentatonic मात्रा, प्रयोग गर्न majeure सम्भव खेल्छ कि सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सी-प्रमुख मा बी-सानो pentatonic मात्रा खेल्न सक्षम हुनेछ।
यसलाई आफ्नो जंगल मा गिटार र पनि गहिरो खेल्न सिक्न ठूलो तरिका हो - ठीक छ, अब तपाईं pentatonic मात्रा भनेर थाह छ।
कालो तारा माफिया: लोकप्रिय समूह को भाग
भारत को नृत्य: प्राचीन कला को इतिहास
Frybest, क्रकरी: मालिकहरूको समीक्षा र सुविधाहरू दायरा
कुन रूख उच्च छ: ब्रेक वा एक सेतोको पेटी? बर्च र स्याउ-रूख: भिन्नता
कुकुर बारेमा एक निबंध: लेखन सुझाव
म स्पेनबाट मेरो आफन्त र साथीहरूलाई के गर्न सक्छु?
विश्व अर्थशास्त्रीहरूको काममा लेनदेन लागत
"रकस्टार पल्ट", कजान - सबै चट्टान 'एन' रोल संस्थाले शहर बारेमा